Izifo zezinhlanzi | Okwezinhlanzi
Izinhlanzi zamanzi ahlanzekile
Izinhlanzi zasolwandle zasolwandle
Izinhlanzi zihlushwa izifo Futhi njengazo zonke izilwane, lezi zingelashwa ukuzivikela ekufeni noma ngisho nasekuzivimbeleni. Ngokumangazayo, kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi uye kudokotela wezilwane ukuze akwazi ukubanakekela kangcono.
Kwesinye isikhathi abantu kholelwa ukuthi lezi zilwane azinakuyiswa kudokotela wezilwane futhi yize kuyinkimbinkimbi, uma ungasebenzisa le nsizakalo. Kulesi sikhala uzothola imininingwane mayelana izifo zezinhlanzi okuphawuleka kakhulu esimweni ngasinye, ohlotsheni ngalunye futhi ikakhulukazi maqondana nohlobo ngalunye lwamanzi noma ngabe lumnandi noma lunosawoti.
Ngeke sikhohlwe ukuthi kufanele sibanakekele futhi sibavimbe ekuguleni, ngakho-ke ulwazi luyimpahla yethu enhle kakhulu.
Ukuntuleka noma oksijini owedlulele e-aquarium
Por IsiJalimane Portillo kwenza iminyaka 2 .
Lapho siqala ukulungisa i-aquarium ukuze izilwane zethu ezifuywayo ezincane zihlale ezimweni ezinhle, kudingeka sazi inani ...
Amakhambi okwelapha izinhlanzi zamakhowe
Uma sine-aquarium yomphakathi, enye yezinkinga ezinkulu zezempilo ezivame ukuthinta izinhlanzi ...
"Inhlanzi yami ibheke phansi, kufanele ngenzeni?"
Akukhona okokuqala sibona inhlanzi ibheke phansi. Cha, lokhu esikushoyo akukhona ...
Por IsiJalimane Portillo kwenza iminyaka 5 .
Yize sibona izinhlanzi zethu e-aquarium, zivikelwe ngokuvamile, kude nabenzeli bangaphandle, izidalwa ezingenzeka, njll. Nakho…
I-Nodulosis, isifo sefungal ezinhlanzini
Por URosa Sanchez kwenza iminyaka 6 .
Ukucasulwa kwama-cysts esikhumbeni senhlanzi nengaphakathi layo yilokho esikwaziyo njenge-nodulosis, ...
Bhukuda isifo sesinye
Isikhumba sokubhukuda siyilungu lomzimba elenziwe ngesaka, elisenhla kwezitho eziningi ...
I-hexamite ezinhlanzini ze-discus
I-Hexamite yi-protozzo ethinta ikakhulukazi izinhlanzi ze-discus. I-hexamite isebenzisa ithuba lokuthi inhlanzi ...
I-pathologies ebaluleke kakhulu izinhlanzi ze-tetra ezingaphathwa yizinambuzane. Ikakhulukazi i-parasite eyaziwa ngokuthi yi-Pleistophora ...
Ungayibona kanjani inhlanzi egulayo
Ezinhlanzini eziningi esinazo e-aquarium, ungabona ukuthi igula ngokumane ...
Ungayelapha kanjani inhlanzi ye-betta yama-parasites
I-betta yinhlanzi ethambekele kakhulu ezifweni noma ezigulini ezingabeka impilo ye ...
Izifo ezivame kakhulu zeguppy namagciwane
Por URosa Sanchez kwenza iminyaka 7 .
Kunezifo eziningi namagciwane ama-guppies angawathola, kepha kunezinqubo eziningana, okuvame kakhulu ...